Japana : Iza no inoana mikasika ny balafomanga Koreana Tavaratra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2018 4:17 GMT
Nanambara ny fikasany mialoha i Korea Avaratra ary naparitaka nanomboka ny 4 Aprily ny vaovao. Namaly ilay bilaogera Atsukoba:
Tsy namoaka fanairana diso indray mandeha, fa indroa ny Minisitry ny Fiarovana, izay manahy amin'ny fifehezana ny toe-draharaha. Bilaogera, Tobias Harris, avy ao amin'ny blaogy Observing Japan, nitantara ny fizotry ny korontana amin'ny antsipiriany ao amin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe “Drowing in Noise“ (milentika anaty tabataba).
Tez, Japoney namorona bilaogy tao amin'ny Tumblr mitanisa ny zava-misy marina rehetra nomen'ny fandaharan'ny radio NHK (Nippon Hōsō Kyōkai). Nisy nizara in-150 mahery ny lahatsoratra.
Diplômaty taloha, Naoto Amaki, manazava izany :